Tu Tu Tha: စာနယ်ဇင်းသမားဘဝကမောက်ကမ ၃
Sunday, October 19, 2008 | Labels: ဖြတ်သန်းမှုစာစု |
This entry was posted on Sunday, October 19, 2008 and is filed under ဖြတ်သန်းမှုစာစု . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
နောက်နေ.မှ တင်မယ် ထင်နေတာ..တော်သေးတာပေါ့...:)..စိတ်ဝင်စားနေတာလေးတွေ သိရလို. ကျေးဇူးပဲနော်.. ဆရာမင်းလူကို အဲဒီလောက်တောင်ကြောက်ကြတယ်လား.. :( ကျမက ဆရာ့ပရိသတ်..
အကို ဒီလောက် ဒေါသကြီးတာ မသိဘူး။ တွေ့ဖူး ခင်ဖူးတာတော့ ခပ်ပြုံးပြုံး နဲ့ အေးအေးပဲ။
အေးလေ..အကိုလဲ ဒီလိုမျိုးတွေ ဘယ်လောက် ခံထားရမှန်းမှ မသိဘဲ။
ကဲ ၄ ကိုတော့ ခပ်အေးအေးပဲ မျှော်ပါမယ် သနားလို့။
အင်း သတင်းစာဆရာတွေ ခေတ်တုန်းက မီးခွက်မှုတ်တဲ့ သတင်းနဲ့ သတင်းစာ စောင်ရေတက်အောင် လုပ်သလိုမျိုး ဖြစ်နေပြီ ထင်ပါ့
ကျုပ်တို့လဲ ဘာဖွရင် ကောင်းမလဲ..ဟဲဟဲ